Iran oo diiday isbahaysiga Maraykanka - BBC News Somali
Iran oo diiday isbahaysiga Maraykanka
15 Sebtembar 2014
Image caption Shirka caalamiga ee Paris ee looga hadlayo ka hortaga Daacish.
Ayatollah Khamenei waxaa sida muuqata ka caraysiiyay hadallo ay American-ku ku celceliyaan oo sheegaya in Iran aysan qayb ka noqon doonin isbahaysiga. Isagoo ka sii baxayay isbitaalka lagaga daweynayay cudurka kansarka xaniinyaha ku dhaca, hoggaamiyaha Iran ma uusan sugi karin inuu American-ka ka xanaajiyo.
Mar uu la hadlayay weriye television-ka qaranka oo ku sugayay albaabka isbitaalka, waxaa uu sheegay in Iran aanay ka qayb geli lahayn shirka ama isbahaysiga xataa haddii lagu marti qaadi lahaa.
Waxaa uu sheegay inay been sheegayaan, labadii bilood ee la soo dhaafay, Maraykanku waxaa uu si ku celcelis ah uga codsanayay Iran inay la shaqeyso, waxaana aan ku iri maya.
Ma jirto si loola shaqeyn karo waddan gacmaha wasakh ku leh ujeeddooyinkiisuna ay wasakh leeyihiin. Waxaana uu intaas ku daray in isbahaysigu aanu wax guul ah gaari doonin, isla sidii uu ugu guuldarreystay Suuriya oo kale.
Horraantii bishan, warar ka soo baxay Tehran waxay sheegeen in Ayatollah uu si hoos ahaaneed u weydiistay mid ka mid ah taliyeyaashiisa sare ee ciidammada inuu Maraykanka kala xiriiro sida ugu habboon ee loola dagaallami karo kooxda Daacish ee woqooyiga Ciraaq.
Saraakiil Maraykan ah waxay maanta ku celceliyeen inuusan jirin doonin iskaashi milateri oo Tehran ay la yeelanayaan.